%smartmod-storyvideo-saving the villiage%
Si dhakhsa ah, Bahdoon waxuu maqlay shanqadha baalasha xagga sare. Waxuu kor u eegay cirka madaw waxuuna arkay humaagta jinka daran ee u soo daganaya jihada tuulada: ciddiyihiisa dheer dheer waxay u iftiimayeen caddaan dhalaalaya sida dayaxa, indhihiisa waxay ka baadhayaan dhulka wax cusub oo la cuno, wuu gaajoonayaa wuuna cabsi galinayaa.
Hadaba Bahdoon waxuu isku geystay dhamaan awoodiisa, dhamaan geesinimadiisa iyo go’aankiisa. Mar alaale marka uu jinku ku soo dagtay tuulada dusheeda, Bahdoon waxuu weerar ka soo qaaday hawdka wuuna hinraagay asagoo wata dhamaan calool adeegiisa. Jinku waa fajacay wuuna baqay inuu arko labo indhood oo olal ah oo ka soo baxaya hawdka, iyo hiinraaga libaaxa geesiga ah ayaa cabsi ku riday calool jileeciisa.
Oogu danbeyntii, libaaxa geesiga ah waxaa loo oggolaaday raxanta waxayna ahayd markii koobaad ee noolashiisa uu dareemay inuu xigto leeyahay. Oogu danbeyntii Bahdoon waxuu ku soo noqday wadanka.